अन्तमा खुबब जय क्यासिनो मा म्याकग्रेसरसँग भेटिन्छ
बोनसको म्याद सकिन्छ: अक्टोबर 7, 2018
2018 को सब भन्दा ठूलो लडाई केवल कुनाको वरिपरि हो र तपाईं आज राति कसलाई जित्ने भनेर जान्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछ! कोनोर म्याकग्रीगोर र खाबीब नुरमागोमेडोभ आमने सामने लस भेगासमा टी-मोबाइल एरेनामा भेला हुनेछन् र ती मध्ये एकले विपक्षीलाई तल झार्नेछ र यूएफसी च्याम्पियनको उपाधि प्राप्त गर्नेछ। हामी यी दुईको बारेमा के जान्दछौं। म्याकग्रेगर सबैभन्दा विवादास्पद मुक्केबाज र मिश्रित मार्शल आर्ट लड़ाकू मध्ये एक हो जसले आफ्नो यूएफसी शीर्षक फिर्ताको अपेक्षा गर्दछ। अनि खाबिबलाई के हुन्छ? ऊ सजिलै अपराजित छ, एक सुपरहीरो जस्तै जो सधैं युद्धको दिमागमा हुन्छ। त्यसैले लडाई हेर्न र आफ्नो उपहार सक्रिय गर्न तयार हुनुहोस्:
10 म्याकग्रीगोर बनाम खाबिबको लागि फ्रिबेट
दुष्ट कथाहरूमा फ्रिस्पिनहरू: गाढा रातो
उपहारहरू पहिले नै तपाईंको खातामा उपलब्ध छन्, तिनीहरूलाई सक्रिय गर्नका लागि:
3. एक फ्रिबेटलाई सक्रिय गर्न एक यूएसडी / ईर 20 निक्षेप बनाउनुहोस्।
4. बक्सि glo ग्लोभहरू राख्नुहोस्!
फेडस्पिनहरू हँसिलो नभए सम्म 07.10.2018 23: 59 GMT 0
तपाईंको प्रोमो पृष्ठमा तोकिएको फ्रीस्पेन्सको बारेमा विस्तृत जानकारी फेला पार्नुहोस्।
फ्रीबर्ट हडताल सम्मको लागि छ 07.10.2018 04: 00 GMT 0
फ्रीबर्ट "स्पोर्ट" ट्याबमा साइटको पीसी र मोबाइल संस्करणहरूमा प्रयोग गर्न उपलब्ध छ। नि: शुल्क शर्त लायक छ 10 usd / eur / aud / cad, 100 sek / nok / cny, 500 rur, 1000 jpyतपाईंको खाता मुद्रामा निर्भर गर्दै। फ्रीबेट केवल एकल शर्तको लागि मात्र म्याकग्रीगोर बनाम खाबिब लडाई, पूर्व-लडाई वा प्रत्यक्षमा न्यूनतम गुणक 1.5 को साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्रीबेटमा जीतहरू तपाइँको बोनस ब्यालेन्समा तुरून्त देखा पर्नेछ नगद बोनसको रूपमा एक्सएनयूएमएक्सएक्सको ब्याजिंग आवश्यकताको साथ, स्पोर्ट्सबेटि inमा मात्र दांव उपलब्ध छन्।
अन्तमा खुबब जय क्यासिनो मा म्याकग्रेसरसँग भेटिन्छ अपडेट गरिएको: अक्टोबर 7, 2018 लेखक: Damon
अन्तमा खाबिबले म्याकग्रीगरलाई भेट्छ ...